March လအတွင်းမှာ Promotion ပေးနေတဲ့ ရန်ကုန်မြို့က ဆိုင် (၁၀)ဆိုင် 709 views
#‎JoJo‬ Hot Pot
March လအတွင်း 10% Discount ပေးထားလို့ Hot Pot ကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက်တော့ သတင်းကောင်းပေါ့နော်။
လိပ်စာက အမှတ် ၂၃(A), န၀ဒေးလမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ်မှာပါ။ ဖုန်းနံပါတ်လေးလဲယူထားအုံးနော် 09 976503040
‪#‎Hot‬ Pot Buffet Express ကလဲ Customer များကို 15% Discount တောင်ပေးနေတယ်နော်
လာရောက်စားသုံးသူ Customer များအတွက် 15%Discount ပေးထားအတွက် တစ်ယောက်ကို (၈၄၀၀) ပဲရှိပါတယ်။အရမ်းကိုတန်နေပီဖြစ်လို့ သွားစားလိုက်ကြအုံးနော်…
အမှတ် 438, (၄၄)လမ်းနှင့်ကုန်သည်လမ်းထောင့်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် မှာပါ. ဖုန်းက 09262611112, 09 262611113 ပါ… မှတ်ထားအုံးနော်…!
‪#‎KFC‬ ရဲ့ ‘အတာMeal’ နဲ့ ထူးခြားတဲ့ ‘ဆုလုံးရေပေါ်’...
‘အတာMeal’ မှာ ကြက်ကြော်(၁၀)တုံး၊ အအေး(၅)ခွက်၊ ထမင်း(သို့) အာလူးချောင်းကြော်(၅)ပွဲ နဲ့ ကြက်သားလုံးကြော် (၃)ပွဲကို ၂၅,၀၀၀ ကျပ်ဖြင့်သာရောင်းချပေးမှာဖြစ်တဲ့အပြင် ထူးခြားတဲ့ ‘ဆုလုံးရေပေါ်’ ဆိုတဲ့ Plan လေးပါရှိလို့ သတင်းကောင်းလေးပြောလိုက်တယ်နော်…
April လ (၁၆)ရက်နေ့ထိအကျုံးဝင်မှာဆိုတော့ အားလုံးပဲခံစားကြည့်ကြအုံးနော်။
‪#‎CAFÉ‬ DEL Seoul ရဲ့ 7$ သာကျသင့်မဲ့ နေ့လည်စာ
နေ့လည်စာလာရောက်စားသုံးသူတိုင်းအတွက် တစ်ခါစားဆလပ်ဘားအခမဲ့ သုံးဆောင်ခွင့်-ဆလပ်ဘားအတွက် သီးသန့် တစ်ယောက်ကို (၇)ဒေါ်လာသာကျသင့်မှာဖြစ်ပါတရ်… ရနိုင်တဲ့ဟင်းလျာတွေက အဆာပြေစာ၊ ဆလပ်အသုပ်၊ ပါစတာ စတာတွေပါပဲ… အပတ်စဉ် တနင်္လာနေ့မှ စနေနေ့အထိ မနက် (၁၁း၃၀) မှ နေ့လည် (၃း၃၀) အထိ ပဲ မို့အမြန်သွားလိုက်ကြအုံးနော်…
အမှတ် 24/1, ပြည်လမ်း၊ (၇)မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်မှာတည်ရှိတာပါ။
‪#‎iTea‬ (or) Serenitea ကိုလဲသွားလိုက်ကြအုံးနော်
Mini Hot Pot, ထိုင်ဝမ်အပ်မှိုကြော် နဲ့ Pink Gava သုံးမျိုးပေါင်းမှ (၇၈၀၀) ကျပ်နဲ့သာရောင်းချပေးမှာဖြစ်လို့ အခုပဲ သွားလိုက်ကြရအောင်နော်။
အဲ့ဆိုင်လေးက န၀ဒေးလမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ်မှာ…09 262224024, 09 73048660
‪#‎Freakshake‬ ရဲ့ Buy 5,Get 1 Promotion
ကန်တော်ကြီး မျှော်စင်ကျွန်းဘက်မှာအသစ်ဖွင့်ထားတဲ့ Freakshakes ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးက (၅)ခွက်ဝယ်ရင် (၁)ခွက်ကို လက်ဆောင်ပေးနေပြီဖြစ်လို့ အားလုံးပဲ လှပတဲ့အပြင်အဆင်လေးတွေကိုသွားရောက်ခံစားစားသုံး ကြဖို့ အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။
‪#‎Fatman‬ Bar & Grill ရဲ့ Promotion
Draft Beer --- > Buy 2, Get 1 Free
Cocktail --- > Buy 1, Get 1 Free
ဗိုလ်ရာညွန့်လမ်းနှင့် န၀ဒေးလမ်းထောင့်မှာရှိတာပါ… 09 420305666
‪#‎Immortal‬ Titans Wine Bar & Dinning ကလဲ Buy 1, Get 1 ဆိုပဲ….
Draft Beer & House Wine --- > Buy 1, Get 1
(Every Sunday, Monday, Tuesday, Thursday)
အမှတ်(၄၉)၊ မိုးကောင်းလမ်း၊ ရန်ကင်းမြို့။ ဖုန်း 01 578739, 09 781996802
‪#‎The‬ Pizza Company က ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်လက်မလွှတ်သင့်တဲ့အခွင့်အရေးနော်….
စားသုံးပြီး Total Amountရဲ့ 10% Discount ကို Student ID Card ပြရုံနဲ့ရနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးနော်…
Pizza Company ရဲ့ဆိုင်ခွဲတွေမှာရနိုင်မှာမို့ လက်မလွှတ်သင့်ဘူးနော်...
‪#‎Fish‬ & Co Myanmar ရဲ့ 50% ကြီးများတောင်ပေးမရ်ဆိုတော့…. သွားလိုက်ကြရအောင်နော်
Happy Hour Promotion - အပတ်စဉ် အင်္ဂါနေ့မှ သောကြာနေ့ ညနေ (၃)နာရီ မှ (၆)နာရီအထိ အဖျော်ယမကာအားလုံးကို 50% လျှော့ပေးမှာဆိုတော့ တကယ်ကိုလက်မလွှတ်သင့်တဲ့အခွင့်အရေးပဲနော်…
ကယ်… စိတ်ဝင်စားတရ်ဆိုရင် အမှတ် 2/B, ပါရမီလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ကိုသာဆက်ဆက်သွားလိုက်နော် ဖုန်း 01 9660952